मनोरञ्जन Archive - Page 8 of 8 - चारदिशा
प्रकाश अर्याल , स्कटल्याण्ड, युके, सुमुधुर स्वरका युवा गायक नारायण धितालको गीत “देखे तिमीलाई” को हालै सार्बजनिक म्युजिक लोकप्रिय बन्दै गएको छ। गायक नारायण धितालकै संगीत र शब्द रहेको उक्त गीत स्कटल्याण्डको रमणनिय स्थानमा छायांकन गरिएको छ। हाल बेल्जियम रहेका गायक धितालले करिब पन्ध्र वर्ष अघि अहिलेका चर्चित कलाकार...
चारदिशा । नेपाली लोक गायन क्षेत्रका वरिष्ट लोकगायकहरु वद्रि प‌‌गेनी र शकुन्तला थापाले नयाँ लोक एल्वम निकाले‍का छन्। लोक गीतलाई साधना वनाएका उनीहरुले विवाहमा प्रयोग गरिने लोकप्रिय ट्यानकुरी वाजाको धुनलाई प्रयोग गरेका छन्। एक नारायण भण्डारीको शव्द संगीत रहेको उक्त गीतको म्यूजिक भिडियो पनि हालै सार्वजनिक गरिएको छ। नेपालको...
काठमाडौं । गायिका मेनुका राई सांगीतिक कोशेली ‘लाईफ’ लिएर श्रोता तथा दर्शकमाझ आएकी छन् । कुनै समय ‘माया आरिसे’ बोलको लोकआधुनिक गीतमार्फत गायन क्षेत्रमा चर्चामा मेनुकाको यो तेस्रो एल्बम हो । यसअघि उनले ‘माया आरिसे’ र ‘१, २, ३’ नामक एल्बम ल्याएकी थिइन् । सार्वजनिक एल्बम ‘लाईफ’ मा ६...
करिब डेढ वर्षअघि निर्माण भएको साहित्यकार कृष्ण धरावासीको कृति (कथा)मा आधारित ‘झोला’ चलचित्रले औसतभन्दा धेरै सफलता हासिल ग-यो । चलचित्रले सतीप्रथा अन्त्य हुनुभन्दा अगाडिको नेपाली समाजको चित्रण गरेको थियो । चलचित्रले तत्कालीन पुरुषप्रधान समाजमा जवानीमै बिधवा हुन पुगेकी नारीको पीडा बोल्छ । यादवकुमार भट्टराईको निर्देशनमा बनेको यो चलचित्रले नेपाली...
बलिउडमा महाखलनायकको रुपमा परिचित सदाशिव अमरापुरकरको ६४ वर्षको उमेरमा सोमबार निधन भएको छ। उनकी छोरी रिमा अमरापुरकरका अनुसार सदशिवलाई स्थानीय समय अनुसार विहान पौने तीन बजे मृत घोषित गरिएको थियो। फोक्सोमा संक्रमण देखिएपछि आठ दिनअघि उनलाई मूम्बईस्थित धिरुभाइ अम्बानी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । अमरापुरकरले अर्धसत्य, सडक, हुकुमत लगायत...
मुम्बई । अभिनेत्री करिना कपुरले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको बहस कलाकर्मीका लागि कामयबी नभएको बताएकी छिन् । एक सेम्पुको प्रचार प्रशारका लागि मिडियासामु प्रस्तुत भएकी करिनाले हरेक मान्छेले हरेक विषयमा फेसबुक र ट्वीटरमा बहस गरिहेको धारणा राख्दै भनिन् ‘प्रेमदेखि युद्धका विषयमा समेत सामाजिक सञ्जालमा बहस गर्न जरुरी छैन ।’ कतिपय...
नायिका करिश्मा मानन्धरलाई नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघले ‘सदाबहार नायिका’को उपाधीबाट सम्मान गर्ने भएको छ । हङकङमा आयोजना हुन लागेको ‘सातौ नेफ्टा फिल्म अवार्ड’को अवसरमा करिश्मालाई यो उपाधी दिन लागिएको हो । नेपाली सिने क्षेत्रमा विगत २५ बर्षदेखि निरन्तर सक्रिय करिश्मालाई सुन्दर नायिका पनि भनिन्छ । सधै उस्तै चमकताले गर्दा...
कसैको खस्रो आवाज,कसैको मसिनो आवाज,कसैको धोद्रो आवाज, कसैको छिपछिपेआवाज, कसैको चोटिलो आवाज आदि । आवाज बोकेर हिंड्नेहरुको आवाजले आज आवाजसुन्नेहरुबाटै चोटिलो जवाफ खाएको छ । खैत त्यो आवाजको दम ? त्यो आवाजको भरपरेर हामीले के सिक्यौँ त आवाज दिनेहरुबाट ? हो, सिक्नु पर्ने आवाजलाई सिकाउने आवाजले समाज दिशा-निर्देशको नजीरमागेको...